I-Anandamide VS CBD: Yeyiphi eyona ilunge ngakumbi kwimpilo yakho?
Ikhaya > I-Anandamide VS CBD: Yeyiphi eyona ilunge ngakumbi kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo!
Yintoni iAnandamide (AEA)
Anandamide (AEA), Ikwabizwa ngokuba yimolekyuli yolonwabo, okanye N-arachidonoylethanolamine (AEA), yi-acid fatty neurotransmitter. Igama elithi Anadamida (AEA) lithathwe kwiSanskrit Yovuyo "Ananda." URafael Mechoulam waqulunqa eli xesha. Njani, kunye nabancedisi bakhe ababini, u-WA Devane kunye noLumír Hanuš, baqala ukufumanisa i- "Anandamide" ngo-1992.
Yintoni iCannabidiol (CBD)?
I-Cannabidiol (i-CBD) yeyesibini iikhompawundi ezisebenzayo ezibizwa ngokuba zii-cannabinoids ezifumaneka kwi i-cannabis sativa (intsangu okanye i-hemp). I-Tetrahydrocannabinol (i-THC) yeyona ixhaphakileyo kwaye ikwangoyena mntu usebenze ngengqondo kwi-cannabinoid efumaneka kwisityalo se-cannabis. I-THC inxulunyaniswa nokufumana uvakalelo "oluphezulu".
Nangona kunjalo, i-CBD ayisebenzi ngokwasemphefumlweni kwaye ifunyenwe kwisityalo se-hemp esinexabiso eliphantsi le-THC. Le propati yenze ukuba i-CBD ifumane ukuthandwa kwicandelo lezempilo kunye nokuba sempilweni.
I-Cannabidiol (i-CBD) yeoyile ngakwelinye icala ivela kwisityalo se-cannabis ngokongeza i-CBD ekhutshiweyo kwioyile yenethiwekhi njengeoyile yembewu ye-hemp okanye ioyile yekhokhonathi.
I-Anandamide kunye ne-Cannabidiol FAQ
Anandamide, ekwabizwa ngokuba yi-N-arachidonoylethanolamine, yi-fatty acid neurotransmitter ethathwe kwi-non-oxidative metabolism ye-eicosatetraenoic acid, omega-6 fatty acid. Igama lithathwe kwigama lesi-Sanskrit ananda, elithetha "uvuyo, ulonwabo, uyolo", kunye ne-amide.
Ngaba i-Anandamide ihomoni?
Uphando lubonelela ngekhonkco lokuqala phakathi kwe-oxytocin - ebizwa ngokuba yi "hormone yothando" - kunye ne-anandamide, ebizwa ngokuba yi "molekyuli yolonwabo" ngendima yayo ekusebenziseni ii-cannabinoid receptors kwiiseli zengqondo ukuphakamisa ukhuthazo kunye nolonwabo.
Ngaba i-anandamide inomdla okanye iyathintela?
Ukuqukumbela, ii-receptors ze-cannabinoid zohlobo lwe-CB1 kunye ne-endo native ligand, i-anandamide, ziyabandakanyeka kulawulo lwe-neuronal excitability, ngaloo ndlela kuncitshiswa i-neurotransmission ethandabuzekayo kwindawo ye-presynaptic, indlela enokuthi ibandakanyeke kuthintelo lokonwaba okugqithisileyo okukhokelela .
Zeziphi ezi zimbini ze-endocannabinoids eziphandwe kakhulu eziveliswa ngumzimba ngokwemvelo?
Abaphandi bacinga ukuba kunokubakho i-receptor yesithathu ye-cannabinoid elinde ukufunyanwa. I-Endocannabinoids zizinto ezenziwe yimizimba yethu ngokwendalo ukukhuthaza ezi receptors. Ezi zimbini ziqondwa kakuhle kwezi molekyuli zibizwa ngokuba yi-anandamide kunye ne-2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Ngaba umzimba womntu unayo inkqubo ye-cannabinoid?
Inkqubo ye-cannabinoid engapheliyo-ebizwa ngokuba sisityalo esikhokelele ekufumaneni kwayo-yenye yezona nkqubo zibaluleke kakhulu zomzimba ezibandakanyeka ekumiseni nasekugcineni impilo yabantu. I-Endocannabinoids kunye nee-receptors zazo zifumaneka kuwo wonke umzimba: kwingqondo, kwizitho zomzimba, kwizicubu ezinxibelelanayo, kwiidlala, nakwiiseli zomzimba.
Yayiyintoni i-cannabinoid yokuqala eyafunyanwa?
Ngo-1992, ilebhu kaMechoulam yabekela bucala i-endocannabinoid yokuqala: imolekyuli eyathi ekugqibeleni yahlelwa njenge-CB1 receptor egonist. Yachongwa njenge-arachidonoyl ethanolamide kwaye ibizwa ngokuba yi-anandamide.
Ngaba i-anandamide itshokolethi?
I-THC, nangona kunjalo, ayifumaneki kwitshokholethi. Endaweni yoko, enye ikhemikhali, i-neurotransmitter ebizwa ngokuba yi-anandamide, ibekwe yodwa kwitshokholethi. Into enomdla kukuba, i-anandamide nayo iveliswa ngokwendalo kwingqondo.
Ngaba itshokholethi i-cannabinoid?
I-Anandamide ibizwa ngokuba yi-endocannabinoid kuba yenziwe ngumzimba wethu kwaye ilingisa ii-cannabinoids ezifumaneka kwisityalo se-marijuana. Ke, isithako kwitshokholethi kunye nesithako kwisityalo sentsangu zombini ziyakwazi ukukhuthaza inkqubo yengqondo yethu yentsangu ye-neurotransmitter.
Ngaba itshokholethi inayo i-theobromine?
I-Theobromine yeyona alkaloid iphambili efumaneka kwicocoa kunye netshokholethi. Icocoa powder inokwahluka ngokwenani le-theobromine, ukusuka kwi-2% theobromine, ukuya kuthi ga kumanqanaba aphezulu ajikeleze i-10%. … Kuhlala kukho iindawo ezixineneyo eziphezulu ebumnyameni kune chocolate yetshisi.
Zeziphi ii-cannabinoids eziqhelekileyo?
Ezi zimbini eziphambili ze-cannabinoids yi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) kunye ne-cannabidiol (CBD). Eyona nto idume kakhulu kwezi zimbini yi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), eyikhemikhali ejongene neziphumo zengqondo ye-cannabis.
Yintoni imolekyuli yolonwabo?
I-Anandamide yikhemikhali yobuchopho eyaziwa kancinci ebizwa ngokuba yi "molekyuli yolonwabo" ngendima eyidlalayo ekuveliseni iimvakalelo zolonwabo. … Isebenza ngokubophelela kwizamkeli ezifanayo kwingqondo njengeyona nto iphambili ekuthinteleni ukusebenza kwentsangu.
Ngaba i-anandamide sisiyobisi?
Anandamide, i-ligand engapheliyo ye-cannabinoid ye-CB1 receptors, ivelisa iziphumo zokuziphatha ezifanayo nezo ze-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), eyona nto iphambili ekusebenziseni ingqondo kwintshangu.
Ngaba umzimba womntu uvelisa ii-cannabinoids?
I-Endocannabinoids. I-Endocannabinoids, ekwabizwa ngokuba zii-cannabinoids ezingapheliyo, ziimolekyuli ezenziwe ngumzimba wakho. Ziyafana ne-cannabinoids, kodwa ziveliswa ngumzimba wakho.
Ngaba i-CBD iyonyusa i-dopamine?
I-CBD ikwakhuthaza i-adenosine receptor ukukhuthaza ukukhutshwa kwe-glutamate kunye ne-dopamine neurotransmitters. Ngokunxibelelana kwayo ne-dopamine receptors, kuyanceda ukuphakamisa amanqanaba e-dopamine kunye nokulawula ukuqonda, inkuthazo kunye nokuziphatha okufuna umvuzo.
Ngaba i-Indica yonyusa i-dopamine?
kunciphisa iintlungu ezibuhlungu. kwandisa ukutya. yonyusa i-dopamine (i-neurotransmitter enceda ukulawula umvuzo wengqondo kunye namaziko olonwabo) ekusebenziseni ixesha lasebusuku.
Loluphi uhlobo lweziyobisi itshokholethi?
Ukongeza kwiswekile, itshokholethi inezinye iziyobisi ezibini, i-caffeine kunye ne-theobromine. Itshokholethi ayivuseleli kuphela ii-opiate receptors kwingqondo yethu, ikwabangela ukukhutshwa kwee-neurochemicals kumaziko olonwabo engqondo.
Yintoni i-anandamide eyenzayo emzimbeni?
Imizimba yethu yenza i-anandamide kwimfuno, ukuze isetyenziswe xa ifuneka ekugcineni i-homeostasis. I-Anandamide ikwenza oku ngokunceda ukulawula ukudumba kunye nokusayina kwe-neuron. Njengoko idaliwe, ibopha ikakhulu ii-cannabinoid receptors CB1 kunye ne-CB2 kanye njengee-cannabinoids ezinje nge-THC xa zingena.
Yintoni inkqubo ye-cannabinoid receptor?
Ii-Cannabinoid receptors, ezibekwe emzimbeni wonke, ziyinxalenye yenkqubo ye-endocannabinoid, ebandakanyeka kwiinkqubo ezahlukeneyo zomzimba kubandakanya ukutya, iintlungu, imvakalelo, kunye nenkumbulo. Ii-Cannabinoid receptors zodidi lwee-receptors zeeseli ezikwiseli ye-protein ye-G edityanisiweyo.
Ngawaphi amaqela ahlukeneyo asebenzayo akhoyo kwi-anandamide?
Amaqela e-Anandamide asebenzayo abandakanya ii-amide, ii-esters, kunye nee-ether ze-polyunsaturated fatty acids, kunye nokwabelana ngokwakha ngokubalulekileyo ii-pharmacophores kunye ne-D-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Wanyusa njani amanqanaba e-anandamide ngokwendalo?
Yitya ukutya okunotyebileyo kwezi ziqhamo kwaye uthintele imveliso yakho ye-FAAH eyonyusa amanqanaba akho e-anandamide! Itshokholethi kukunye ukutya okunokunceda ukukhulisa i-anandamide. Inesakhi esaziwa ngokuba yi-ethylenediamine ethintela imveliso ye-FAAH. Gcina oku kutya kuthathu engqondweni ngexesha elizayo xa usiya kwivenkile.
Ngaba itshokholethi ine-anandamide?
Ngaba itshokholethi sisiyobisi?
Itshokholethi inexabiso elikhulu leswekile. Ukongeza kwiswekile, itshokholethi inezinye iziyobisi ezibini, i-caffeine kunye ne-theobromine. Itshokholethi ayivuseleli kuphela ii-opiate receptors kwingqondo yethu, ikwabangela ukukhutshwa kwee-neurochemicals kumaziko olonwabo engqondo.
Yintoni iziyobisi kwitshokholethi?
I-Theobromine yeyona alkaloid iphambili efumaneka kwicocoa kunye netshokholethi.
Yeyiphi imichiza ekhoyo kwitshokholethi?
I-Theobromine, eyayisaziwa njenge-xantheose, yi-alkaloid ekrakra yesityalo sekhokho, kunye nefomula yeekhemikhali C7H8N4O2. Ifumaneka kwitshokholethi, kunye nokunye ukutya okuninzi, kubandakanya amagqabi esityalo seti, kunye nekola nut.
Ngaba itshokholethi iyayinyusa i-serotonin?
Nangona kunjalo, kuba itshokholethi iqulethe i-tryptophan, ukonyuka kweserotonin kunokunceda uchaze ukuba kutheni umntu enokuziva onwabile, ezolile, okanye exhalabile emva kokutya iqhekeza lekhekhe yakhe yetyhokolethi (iSerotonin).
Yintoni i-anandamide ejongene nayo?
I-Anandamide idlala indima kummiselo wokuziphatha kokondla, kunye nokuveliswa kwe-neural yenkuthazo kunye nolonwabo. I-Anandamide itofelwe ngqo kulwakhiwo lobuchopho obunxulumene nomvuzo we-forebrain yonyusa iimpendulo ezithandekayo zeempuku kwincasa ye-sucrose enomvuzo, kunye nokwandisa ukutya.
Ngaba i-CBD yintsholongwane?
I-THC kunye ne-CBD zinamandla okulwa ne-antioxidants-enamandla kune-vitamin C kunye no-E. Ngapha koko, i-US Government Patent 1999/008769 ilungiselelwe ngokukodwa iipropathi ze-neuroprotectant kunye ne-antioxidant ye-cannabinoids.
Yenza ntoni i-enzyme ye-FAAH?
I-fatty acid i-amide hydrolase (i-FAAH) yi-enzyme ye-mammalian ehambelana ne-membrane enzyme ethoba usapho olunamanqatha e-amide yosasazo lwee-lipids, ezibandakanya i-endo native cannabinoid anandamide kunye ne-oleamide.
I-CBD iyichaphazela njani i-anandamide?
Izifundo zebhayoloji zibonisa ukuba i-cannabidiol inokunyusa ukubonakaliswa kwe-anandamide engagungqiyo ngokungathanga ngqo, ngokuthintela ukonakaliswa kwe-intracellular ye-anandamide ebanjiswe yi-enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Ithetha ntoni i-cannabinoid?
Igama le-cannabinoid libhekisa kuyo yonke into yemichiza, nokuba yeyiphi na imvelaphi okanye imvelaphi, ejoyina ii-receptors ze-cannabinoid zomzimba kunye nengqondo kwaye ezineziphumo ezifanayo kwezo ziveliswa sisityalo seCannabis Sativa. … Ezi zinto zimbini ziphambili zi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) kunye ne-cannabidiol (CBD).
Yintoni inkqubo ye-endocannabinoid kwaye yenza ntoni?
Umzimba womntu uqulethe inkqubo ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi-endocannabinoid system (ECS), ebandakanyekayo kulawulo lwemisebenzi eyahlukeneyo kubandakanya ukulala, ukutya, iintlungu kunye nokuphendula kwenkqubo yomzimba yokuzikhusela.
Ngaba umzimba unee-cannabinoid receptors?
Ii-Cannabinoid receptors, ezibekwe emzimbeni wonke, ziyinxalenye yenkqubo ye-endocannabinoid, ebandakanyeka kwiinkqubo ezahlukeneyo zomzimba kubandakanya ukutya, iintlungu, imvakalelo, kunye nenkumbulo. … Ngo-2007, kwabanjwa ii-cannabinoids ezininzi kwi-G protein-coupled receptor GPR55 kwingqondo.
Ngaba i-CBD inyusa i-anandamide?
Ngokwe-cannabinoid i-receptor-exhomekeke kwiziphumo ze-CBD kummiselo woloyiko olufundileyo oluchazwe apha ngasentla, i-CBD inyusa amanqanaba e-anandamide ngokuthintela ukuphinda kuthathe kwakhona ukuhambisa kunye nokuthotywa yi-FAAH.
Yeyiphi i-cannabinoid esetyenziselwa uxinzelelo?
Ngethamo elisezantsi le-THC kunye nedosi emodareyithayo ye-CBD, iprofayili ye-cannabinoid ye-Harlequin ilungelelene nabalwi bexhala abangayikhathalelanga imincili. Eyona terpene yayo ininzi yi-myrcene, ekukholelwa ukuba inefuthe lokuphumla kwaye isetyenzisiwe kwimbali njengesixhobo sokulala.
Ngaba i-CBD iyalunceda uxinzelelo?
I-CBD ihlala isetyenziselwa ukujongana nexhala, kunye nezigulana ezifumana ubunzima bokungalali, uphononongo lucebisa ukuba i-CBD inokunceda ekulaleni nasekulaleni. I-CBD inokubonelela ngenketho yokunyanga iintlobo ezahlukeneyo zentlungu engapheliyo.
Ngaba utywala bulunceda ixhala?
Utywala buyadambisa kwaye buyadandathekisa obuchaphazela inkqubo ye-nervous system. Ekuqaleni, ukusela kunokunciphisa uloyiko kwaye kususe ingqondo yakho kwiingxaki zakho. Inokukunceda uzive uneentloni, ikunike amandla, kwaye ikwenze uzive ukhululeke ngokubanzi.
Ndifumana njani ukuba ndinexhala?
Ukufumanisa ingxaki yokuxhalaba, ugqirha wenza uvavanyo lomzimba, abuze malunga neempawu zakho, kwaye acebise uvavanyo lwegazi, olunceda ugqirha ukuba abone ukuba ngaba enye imeko, enje ngehypothyroidism, inokubangela iimpawu zakho. Ugqirha usenokubuza nangawo nawaphi na amayeza owasebenzisayo.
Zeziphi iziyobisi akufuneki zithathwe kunye ne-CBD?
Izidambisi-zintsholongwane (ezifana ne-fluoxetine, okanye i-Prozac)
Amayeza anokubangela ukozela (i-antipsychotic, benzodiazepines)
I-Macrolide antibiotics (erythromycin, clarithromycin)
Amayeza entliziyo (ezinye iicalcium block blockers)
Ngaba i-CBD iyayikhupha i-dopamine?
Yeyiphi i-dopamine ephantsi evakalelwa ngathi?
Ezinye zeempawu kunye neempawu zeemeko ezinxulumene nokusilela kwe-dopamine zibandakanya: iincampu zemisipha, i-spasms, okanye ukungcangcazela. iintlungu neentlungu. ukuqina kwezihlunu.
Ngaba icaffeine inyusa amanqanaba edopamine?
I-caffeine, eyona nto isetyenziswa kakhulu ehlabathini, isetyenziselwa ukukhuthaza ukuphaphama kunye nokwenza ukuba siphaphile. Njengezinye iziyobisi ezikhuthaza ukuvusa (izikhuthazi kunye ne-modafinil), icaffeine yonyusa uphawu lwe-dopamine (DA) kwingqondo, eyenza ikakhulu ngokuchasene ne-adenosine A2A receptors (A2AR).
Yeyiphi indlela ekhawulezayo yokwandisa i-dopamine?
Yitya iiprotheyini ezininzi
Yitya amanqatha amancinci
Yitya iimbotyi zeVelvet
Fumana ukukhanya okwaneleyo kwelanga
Ngaba i-CBD inyusa i-serotonin?
I-CBD ayinyusi amanqanaba e-serotonin, kodwa inokuchaphazela indlela i-receptors yeekhemikhali zobuchopho eziphendula ngayo kwi-serotonin esele ikhoyo kwinkqubo yakho. Uphononongo lwezilwanyana lwango-2014 lwafumanisa ukuba ifuthe le-CBD kwezi receptors kwingqondo zivelise zombini i-antidepressant kunye ne-anti-ixhala.
Ngaba i-CBD inokunceda kwingqondo yakho?
Abaphandi bakholelwa ukuba amandla e-CBD okusebenza kwinkqubo ye-endocannabinoid kunye nezinye iinkqubo zokubonisa ubuchopho zinokubonelela ngezibonelelo kwabo baneengxaki zemithambo-luvo. Ngapha koko, enye yezona zinto zisetyenziswayo kufundiswa i-CBD kukunyanga ukuphazamiseka kwemithambo-luvo njengokuxhuzula kunye nokuqina kwemithambo.
Ndingawanyusa njani amanqanaba e-serotonin?
Yeyiphi eyona oyile ye-CBD ilungileyo yokuthenga ukunciphisa umzimba
I-Anandamide ngumlamli we-lipid osebenza njenge-endo native ligand of CB1 receptors. Ezi receptors nazo zijolise ikakhulu ekujoliseni iimolekyuli ezinoxanduva lweziphumo ze-Δ9-tetrahydrocannabinol, isithako se-psychoactive kwiCannabis sativa.
Uyenza njani i-anandamide?
Yenziwe ngokudibeneyo ukusuka kwi-N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine ngeendlela ezininzi. Iyathotywa ikakhulu yi-fatty acid amide hydrolase (FAAH) enzyme, eguqula i-anandamide ibe yi-ethanolamine kunye ne-arachidonic acid.
Ngaba umzimba womntu uyivelisa i-CBD?
Into ongayiqondiyo, nangona kunjalo, kukuba oku kulandela kwinto yokuba umzimba womntu uvelisa i-cannabinoids yayo engapheliyo: izinto ezilinganayo zendalo ezifumaneka kwisityalo se-cannabis, njenge-THC (tetrahydrocannabinol) kunye ne-CBD (cannabidiol).
Ngaba i-CBD ilungile ngenene?
Akukho bungqina, umzekelo, bokuthi i-CBD inyanga umhlaza. Kukho ubungqina obulinganiselweyo bokuthi i-CBD inokuphucula iingxaki zokulala, iintlungu ze-fibromyalgia, ukungxama kwemisipha okunxulumene ne-multiple sclerosis, kunye noxinzelelo. UGqirha Levy uthi: “Olona ngenelo ndilubonileyo njengogqirha kukunyanga iingxaki zokulala, unxunguphalo kunye neentlungu.
Ngaba iimveliso ze-CBD zikhuselekile?
Ukusetyenziswa kwe-CBD kukwanobungozi. Nangona ihlala inyamezeleka kakuhle, i-CBD inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga, ezinjengomlomo owomileyo, urhudo, ukunciphisa ukutya, ukozela nokudinwa. I-CBD ikwanokunxibelelana namanye amayeza owathathayo, afana nezicoci gazi.
Yenza ntoni i-CBD kwingqondo?
Ezi mpawu zinxulunyaniswe nokukwazi kwe-CBD ukusebenza kwii-receptors zengqondo ze-serotonin, i-neurotransmitter elawula imeko-bume kunye nokuziphatha ekuhlaleni. Isishwankathelo Sebenzisa i-CBD kubonisiwe ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo kwizifundo zabantu nezilwanyana.
Ngaba i-CBD iyishiya ngokukhawuleza kangakanani le nkqubo?
I-CBD ihlala kwinkqubo yakho kangangeentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5, kodwa olo luhlu alusebenzi kuye wonke umntu. Abanye, i-CBD inokuhlala kwinkqubo yabo iiveki.
Ifumaneka phi ianandamide?
I-Anandamide yenziwe ngokudibeneyo kwimimandla yengqondo ebalulekileyo kwimemori, iinkqubo zokucinga kunye nolawulo lokuhamba. Uphando lubonisa ukuba i-anandamide idlala indima ekwenziweni nasekuphuleni unxibelelwano lwexesha elifutshane phakathi kweeseli zemithambo-luvo, kwaye oku kunxulumene nokufunda kunye nememori.
Ngaba i-anandamide yi-cannabinoid?
Ikwabizwa ngokuba yi-N-arachidonoylethanolamine (AEA), i-anandamide inxibelelana nezamkeli zomzimba ze-CB ngokufanayo kwii-cannabinoids ezinjenge-THC. I-arhente yokubopha ye-neurotransmitter kunye ne-cannabinoid-receptor esebenza njengomthunywa wesiginali kwii-CBXNUMX receptors ezikulo mzimba.
Imallet PE, uBeninger RJ (1). "I-endo native cannabinoid receptor agonist anandamide impairs memory in rats". I-Pharmacology yokuziphatha. 1996 (7): 3–276
UMechoulam R, uFride E (2). "Indlela engagangathwanga eya kwi-endo native brain i-cannabinoid ligands, i-anandamides". KwiPertwee RG (ed.). Ii-cannabinoid receptors. IBoston: Icandelo leendaba. iphepha. 1995–
(3) .I-Rapino, C.; IBattista, N.; Bari, M.; IMaccarrone, M. (2014). "I-Endocannabinoids njengama-biomarkers okuzala komntu". Ukuhlaziywa koLuntu. 20 (4): 501-516.
(4).(2015). I-Cannabidiol (i-CBD) kunye ne-analogs yayo: uphononongo lwefuthe labo kukudumba. I-Bioorganic kunye neMedical Chemistry, 23 (7), 1377-1385.
ICorroon, J., kunye nePhillips, JA (5). Isifundo esinqamlezileyo saBasebenzisi beCannabidiol. I-cannabis kunye nophando lwe-cannabinoid, 2018 (3), 1-152.
(6).IZiko leLizwe leNgcaciso yeBiotechnology (2020). Isishwankathelo seCompChem Compound seCID 644019, iCannabidiol. Ibuyisiwe ngo-Okthobha 27, 2020, ukusuka .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… kunye no-C Silva, A (2014). Iziphumo zokuthintela uxinzelelo kunye noxinzelelo lwe-cannabidiol: ikhompawundi ye-Cannabis sativa. I-CNS kunye ne-Neurological Disorder-Iithagethi zeZiyobisi (Zangaphambili iithagethi zamachiza-i-CNS kunye nokuphazamiseka kwentliziyo), 13 (6), 953-960.
Intsikelelo, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (8). I-Cannabidiol njengonyango olunokubakho lokuphazamiseka koxinzelelo. Neurotherapeutics: Ijenali yoMbutho waseMelika wovavanyo lweNeuroTherapeutics, 12(4), 825-836.
(9).IAnandamide (AEA) (94421-68-8)
(10).Uhambo lokujonga umz.
(11).I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho
(12).Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(13).Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(14).Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(15).Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(16).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(17).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(18).Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
(19).Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
I-Anandamide kwitshokholethi inokuthi inyanzeliswe, kodwa yaphuke ngokukhawuleza kangangokuba ayisebenzi.
Idosi emodareyithayo ye-anandamide eyenziwe yasebenza CB1 ukunciphisa indlela yokuziphatha efana noloyiko. Kodwa kwiidosi eziphezulu, i-anandamide nayo yaqalisa ukwenza i-ion ijelo le-TRPV1, elichasene nefuthe le-anandamide's anxiolytic.
Oku kubizwa ngokuba yimpendulo yedosi "biphasic" okanye "emise okwe-U".
I-Anandamide iveliswa kwimizimba yethu ngelixa i-THC kunye ne-CBD ziveliswa kwizityalo.
Ukufuna nje ukuba inqaku lakho liyamangalisa. Ukucaca kwisithuba sakho kupholile kwaye ndingacinga ukuba uyingcali kulo mbandela. Kulungile kunye nemvume yakho makhe ndibambe ifidi yakho ye-RSS ukuze uhlale unolwazi ngeposi ekufutshane. Enkosi kwisigidi kwaye nceda uqhubeke nomsebenzi owonwabisayo.
I-CBD inqanda i-FHAA ekwaphuleni i-Anandamide leyo enegalelo ekunciphiseni uxinzelelo kunye nokunciphisa ukudumba emzimbeni.
Ndizifundile izinto ezimbalwa ezichaza ulonwabo kwiAnandamide uqobo, ndaphinda ndafunda ukuba umntu othile uthathe isicatshulwa seTheobroma Caocao kwaye waba neziphumo ezimyoli. Mhlawumbi ndiza kujonga emva koko.
Zimbini ii-receptors ze-cannabinoid emzimbeni: CB1 kunye ne-CB2. I-THC isebenza njenge-agonist kwi-CB1 ekhokelela ekubulaweni kwe-dopamine.
I-THC kunye ne-CBD zombini ziyi-phytocannabinoids, ngelixa i-anandamide iyi-endo native cannabinoid (iveliswa yimizimba yethu)
Xa i-THC ibophelela kwi-CB1 isebenzisa i-G-Protein Coupled receptor eya kuthi emva koko isebenzise i-enzyme kunye / okanye isithunywa sesibini. Iziphumo zezi GPCR zikhokelela kwiziphumo ezininzi, ezinje ngokuthamba isicaphucaphu, ukuthomalalisa, kunye nentlungu.
Inokukunceda ukucinga ngayo njengesixhobo seRube Goldberg - i-THC ibophelela kwi-CB1 receptor, eyenza i-GPCR isebenze, esenza ezinye iindlela zisebenze.
Sinee-cannabinoid receptors, CB1 kunye ne-CB2 receptors ezichanekileyo. Ii-receptors ze-CB1 xa zisebenza, nokuba kwenzeka ngokwendalo kwi-endocannabinoids okanye eyenziweyo okanye eyenzeka ngokwendalo, inqanda abathumeli abaninzi bemichiza. Enye yazo yi-GABA ye-neurotransmitter, ethi yona ithintele ukukhutshwa kwe-dopamine, ikunike inxenye yokuziva kwakho kuphezulu kukhula. Kukho amakhulu e-cannabinoids ezinokuthi zisebenze ezi zinto zimbini zokufumana, kwaye kukho ii-receptors ezimbalwa zinoveli ezingakhange zifundwe kakuhle ukuba uninzi lwee-cannabinoids zikwanokubambana.